(သေစေနိုင်သည့် မသိမြင်မှု) Beware of the Obstacles on the Path to the Kingdom | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
(သေစေနိုင်သည့် မသိမြင်မှု) Beware of the Obstacles on the Path to the Kingdom
အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့် အမှုတော် - အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော် မွေးဖွားခြင်းနှင့် ကြီးထွားတိုးတက်ခြင်း သမိုင်းကြောင်း အပိုင်းတစ်- Best Myanmar Movie (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled? Myanmar Subtitle Movie (ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကောင်းမွန်ပါသည်) Myanmar New Movie Full 2020- ကလေးရေ၊ အိမ်ပြန်လာပါ Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၃ - ထလော့ ကျွန်အဖြစ် မနေသောသူတို့) Myanmar Gospel Movie (ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ) | Clarifying the Connection Between the Bible and God Myanmar Christian Movie 2020 (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ - နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း) Myanmar Christian Movie 2020 (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း ၂ - ဘုရားကျောင်း ပြိုလဲပြီးနောက်) Myanmar Gospel Movie 2019 (တံခါးကိုခေါက်နေခြင်း)Wise Virgins Meet the Return of the Lord (အိပ်မက်မှ နိုးထလာခြင်း) Revealing the Mystery of Entering the Kingdom of Heaven Best Myanmar Movie (မိခင်တစ်ယောက်၏ မေတ္တာ) | God Showed Me the Correct Way to Educate My Child Myanmar Gospel Movie - ဒီလောက် သာယာလိုက်တဲ့ အသံ Best Myanmar Movie 2019 (ကျော့ကွင်းကို ထိုးဖောက်ကျော်လွန်ခြင်း) Myanmar Gospel Movie (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) How to Believe in God to Accord With His Will (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ)The Lord Jesus Has Returned to Flesh ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ (သေစေနိုင်သည့် မသိမြင်မှု) Beware of the Obstacles on the Path to the Kingdom Myanmar Movie (ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ) ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားရာလမ်းကြောင်းကို သင်သိပါသလား Myanmar HD Movie - စောင့်လို့နေ - ပညာရှိ သတို့သမီး များဟာ သခင်ဘုရားကို ကြိုကြတယ်။ Myanmar New Movie - သီလသမာဓိအပေါ် ဘယ်တော့မှ နေမဝင်ရာ - အလုပ်ခွင်၌ ခရစ်ယာန် သက်သေခံချက် Myanmar Christian Movie 2019 (ဘယ်သူက ဘုရားသခင်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသံနဲ့ထပ်ပြီးရိုက်နေတာလဲ) Myanmar Gospel Movie 2019 (နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ) The Judgment of God Saved Me This Way Myanmar Gospel Movie (ဧဝံဂေလိတရား သယ်ဆောင်လာသော တမန်) | Preach Everlasting Gospel in the Last Days Myanmar Christian Movie (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) | God's Warning of the Last Days Myanmar Gospel Movie | (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) | Christ of the Last Days Has Come Myanmar Christian Movie (ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဟူသော ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ခြင်းအိပ်မက်) Myanmar Gospel Movie (နားခိုရာအိမ် ဘယ်မှာလဲ) God Gave MeaHappy Family
ဇန်မူအန်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ တရုတ်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် သခင်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သခင်အတွက် စိတ်အားထက်သန်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီး အသုံးတော်ခံလျက်ရှိသည်။ တစ်နေ့တွင် သူ၏ အဒေါ်ဖြစ်သူသည် သခင်ယေရှုသည် သမ္မာတရားကို ဖော်ပြဖို့ပြန်လာပြီးဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးသောကာလတွင် လူသားကို တရားစီရင်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူ့ကို သက်သေခံခဲ့ပြီး ဤသတင်းသည် သူ့အား အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့သည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖတ်ပြီး အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော်၏ ဇာတ်လမ်းနှင့် ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ပြီးနောက် ဇန်မူအန်၏ နှလုံးသားသည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည် သမ္မာတရားဖြစ်ပြီး အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုပြန်လာခြင်းပင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း လက်ခံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် သူ၏ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတို့နှင့်အတူ နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ဘုရားသခင်၏ အမှုတော်ကို စတင်လေ့လာစူးစမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့အသင်းတော်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ သင်းအုပ်ဆရာမာသည် ဤအကြောင်းကို သိရှိသွားပြီး ဇန်မူအန်ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီး တားဆီးဖို့ ကြိုးစားသည်။ သူသည် ဇန်မူအန်အား မှန်ကန်သည့်လမ်းကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းကို စွန့်လွှတ်ရန်အတွက် အရှေ့အရပ်မှ လျှပ်ပြက်ခြင်းအား အသေရဖျက်ရှုတ်ချထားသည့် စီစီပီအစိုးရ၏ ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုကို ပြသည်။ ဤဗီဒီယိုကြောင့် ဇန်မူအန်သည် အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့သည် သမ္မာတရားဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ဖြစ်သည်ကို သူ သိသာစွာ မြင်နိုင်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ဘာသာရေးလောကမှ သင်းအုပ်ဆရာများနှင့် အကြီးအကဲများက အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်အား အဘယ်ကြောင့်ရှုတ်ချကြသနည်း။ သူတို့ကိုယ်တိုင်သာ စူးစမ်းလေ့လာဖို့ ငြင်းဆန်ရုံတင်မကဘဲ တခြားလူများကိုပါ မှန်ကန်သည့်လမ်းကို လက်ခံခြင်းမှ တားဆီးဖို့ ကြိုးစားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဇန်မူအန်သည် လိမ်ညာခံရပြီး မှားယွင်းသည့်လမ်းကို လျှောက်မိမည်ကို ကြောက်ရွံ့သည်။ သို့သော် ချီဆောင်ခြင်းခံရမည့်အခွင့်ကို ဆုံးရှုံးရမည်ကိုလည်း ကြောက်ရွံ့သည်။ သူ၏ သဘောထားကွဲလွဲမှု၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကြားတွင် သင်းအုပ်ဆရာမာသည် စီစီပီနှင့် ဘာသာရေးလောကမှ အဖျက်သဘောဆောင်သည့် ဝါဒဖြန့်မှုများကို ပိုပြီးတော့ ပြသပြီး ဇန်မူအန်၏နှလုံးသားတွင် သံသယများပိုမို ထွက်ပေါ်လာသည်။ သူသည် သင်းအုပ်ဆရာမာ၏စကားကို နားထောင်ပြီး စစ်မှန်သည့်လမ်းကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် အသင်းတော်၏ သက်သေခံသူများထံမှ သက်သေခံခြင်းနှင့် မိတ်သဟာရပြုခြင်းတို့ကို ကြားပြီးနောက် ဇန်မူအန်သည် မှန်ကန်သည့်လမ်းကို စူးစမ်းရှာဖွေရာတွင် အခြေခံအကျဆုံးအချက်သည် ဤလမ်းသည် သမ္မာတရားရှိမရှိနှင့် ဤလမ်း၏ ဖော်ပြချက်သည် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ဟုတ်မဟုတ် ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဆိုသည်ကို နားလည်လာသည်။ သမ္မာတရားများကို ဖော်ပြနိုင်သည့် မည်သူမဆို ခရစ်တော်၏ ပေါ်ထွန်းမှုပင်ဖြစ်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကျင့်ပျက်စီးသည့် မည်သည့်လူသားမျိုးနွယ်မဆို သမ္မာတရားကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဤအချက်သည် ငြင်းလို့မရသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သည့်လမ်းကို စူးစမ်းရှာဖွေရာတွင် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို အာရုံစိုက်နားထောင်ခြင်းမရှိဘဲ စိတ်ကူးထင်မြင်မှုအပေါ် အခြေခံပြီး တိမ်စီးပြီး သခင်ယေရှုကြွဆင်းလာမှုကို စောင့်နေလျှင် ဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းမှုကို ဘယ်သောအခါမှ ကြိုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဇန်မူအန်သည် နောက်ဆုံး၌ သခင်ယေရှုမိန့်ကြားသည့် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားသည့် ဉာဏ်ပညာရှိသည့် အပျိုတော်၏ နက်နဲမှုကို နားလည်ပြီး စီစီပီအစိုးရ၊ သင်းအုပ်ဆရာနှင့် အကြီးအကဲတို့၏ လိမ်ညာမှုများနှင့် အဓိပ္ပါယ်မရှိသည့် သီအိုရီများကို ဆက်လက်မယုံကြည်တော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဘာသာရေး သင်းအုပ်ဆရာ၏ ကန့်သတ်မှုနှင့် ချည်နှောင်မှုတို့မှ လွတ်မြောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဇန်မူအန်သည် စစ်မှန်သည့်လမ်းကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်း၏ ခက်ခဲမှုကို နက်နက်နဲနဲ ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ ပိုင်းခြားသိမြင်မှု မရှိဘဲ သို့မဟုတ် သမ္မာတရားကို မရှာဖွေဘဲ ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို ကြားဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ ပုလ္လင်တော်ရှေ့သို့ ချီဆောင်ခြင်းခံရဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီလိုမဖြစ်ဘဲ စာတန်၏ လှည့်စားခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုခံရပြီး စာတန်၏ ပိုက်ကွန်ထဲတွင်သာ သေဆုံးသွားနိုင်သည်။ ဤသည်မှာလည်း ကျမ်းစာ၏ နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကို အလုံးစုံ ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။ “ငါ့လူတို့သည် ပညာနည်းသောကြောင့် ဆုံးရှုံး ကြ၏” (ဟောရှေအနာဂတ္တိကျမ်း ၄:၆)။ “မိုက်သောသူတို့မူကား၊ ဉာဏ်မ ရှိသောကြောင့် သေကြလိမ့် မည်။” (သုတ္တံကျမ်း ၁၀:၂၁)
Atmosphere 06 Green Screen Chroma Key Green Screen（ https://youtu.be/O-S83BGHGrc ） by HD Green Screen/CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Myanmar Gospel Movie Trailer | (နာကြည်းဖွယ်ရာ အမှတ်တရများ)| The Lord Jesus Christ Awakens My Soul
Myanmar Christian Movie Trailer (နားခိုရာအိမ် ဘယ်မှာလဲ) God Is the Harbor of My Soul
Myanmar Christian Movie Trailer (ဒီလောက်သာယာလိုက်တဲ့ အသံ) The Word of the Holy Spirit
2020 Myanmar Movie Trailer (မျှော်လင့် တောင့်တခြင်း) | How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled?
Myanmar Gospel Movie Trailer (ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း) | Clarifying the True Meaning of Faith in God
Myanmar Christian Movie Trailer ( ဘယ်သူက ဘုရားသခင်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသံနဲ့ထပ်ပြီးရိုက်နေတာလဲ)
Myanmar Christian Movie Trailer (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) God's Warning of the Last Days
Movie Trailer (ပြောင်းလဲခြင်းအခါသမယ) Hear the Voice of God and Be Raptured to the Kingdom of Heaven